Buza noma American lapho bukhoma Russian e-New York, futhi akungabazeki ukuthi uyokhomba nawe bebheke e-Long Island, lapho eBrooklyn nakuzo zonke izifunda zalo ngabanye zokuphatha. Nansi indawo edume ngokuthi "Little Odessa," lapho uhlala ikakhulukazi abasuka ezweni elaliyiSoviet Union. Wabiza Brayton Bich, futhi iningi zokudla, izitolo ngisho edition isiRashiya we iphephandaba yigama.
Sayo samanje igama idolobha eBrooklyn yethiwa resort eponymous, elise-UK. Ngokushesha lapha kwavula ujantshi, kamuva elaba igatsha le-New York ongaphansi komhlaba. Ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili, endaweni uye izivakashi, futhi kamuva Brayton Bich futhi bonke baba yinto imfashini lapho baseYurophu abacebile yafika yema.
Zonke bathuthukisa neMpi Yezwe II. District of yaphenduka indawo ethandwa yokuhlala babantu abampofu futhi ezikhathalela isikhashana sasibhekwa njengophawu lokuthi ecindezelekile. Ngokusebenzisa isikhathi, izinga lokuzalwa anda eziseBrooklyn endaweni kancane kancane zaqala ukuhluma futhi. Ngokwezinga elikhulu le negalelo ekuchithweni abafuduki ukuphuma ngaphansi kweSoviet Union. Ngokushesha kwavela uhlobo wesifunda Russian e-New York. EBrooklyn uye ukhangwa abasuka eMpumalanga Yurophu, cheapness nengqalasizinda yimpumelelo, ezokuthutha impambano ezinhle futhi etholakala eduze nogu.
Brighton Non-ehlonishwayo kwaze kwaba sekupheleni kwekhulu elidlule, lapho kulandelwa ngokuwa eU.SSR kabusha eminye. Kuyindida, lezi zenzakalo ezivele wanika yisisusa esinamandla ekuthuthukiseni "Little Odessa", ngoba izakhamizi abampofu baseSoviet ukuthi abenze noma e-United States angena ngomfutho futhi ukugeleza ayengaphansi osomabhizinisi Russian.
Isizukulwane sokuqala owathuthela Brighton, babenza konke okusemandleni ukuze izingane zabo hhayi kuphela ukwazi isiNgisi, kodwa namanje abakakhohlwa Russian. Ekuqaleni entsha wesifunda ekhulwini Russian e-New York City yashaywa cishe njalo egcwele izitolo nezindawo zokudlela, wasebenza abasebenzi abakhuluma isiRashiya, futhi kungenzeka ukuthenga imikhiqizo Russian. Eduze nogu kwakhiwa inkundla yemidlalo yaseshashalazini enhle "Millenium" nalabo abane- post-Soviet wayehlala kumahamba eziyinkimbinkimbi zikanokusho yokuhlala Oceana. Traffic empambana eziseBrooklyn nanamuhla omunye the best e-New York.
Iningi wendawo amabhange, amahhovisi, ukuzijabulisa kanye eziyinxanxathela of isiRashiya kuyinto evamile kunokuba ngaphandle, futhi lapha ungezwa izikhathi ezingaphezu ngesiNgisi. Isonto ngalinye e "Little Odessa" zekhava zezinkanyezi Russian, ngakho ISIFISO inkulumo lendawo cishe akudingekile.
Ngasogwini Brighton ahlukaniswe amamitha 100 elinesihlabathi esimhlophe ngasemaphethelweni, udinga ukuthi ehlobo yalo iyipharadesi izivakashi? Zonke amabhishi anemisila zangasese mahhala futhi dispensers amanzi. Sea zokuphila unogada ubusuku nemini, futhi ngasogwini zikhona izindawo ezikhethekile ukudoba abathanda.
Kuze kube manje, Russian District eNew York City, kanye angomakhelwane Coney Island ubhekwa ezindaweni ithuthuka ngokushesha kakhulu. Ngokusho kochwepheshe, lezi isikhungo ezimbili nezokuphatha ethembisayo ngokuya investimenti eshumini leminyaka elizayo.
Ngokusho ukubalwa kwabantu zakamuva sabantu, "Little Odessa" has abantu nje phezu ayizinkulungwane 23. Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi leli nani - hhayi ukugcina umthetho, ngoba akubona bonke abantu ungene isivumelwano futhi, ngokufanelekile, abafakiwe izibalo. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sasehlobo labantu endaweni kukhuphuke ngo-2-3 izikhathi ngenxa izivakashi ngokuvakashela. Ngokuphathelene ubulili, e Brighton, amadoda nabesifazane ecishe ilingane.
wesifunda Russian e-New York ophila title yayo: 36% of the labantu sokuqondisa bakwazi ukukhuluma noma kabi ukukhuluma isiNgisi, kuyilapho agglomeration iyonke, lesi sibalo ingeqi 7%. Mayelana 73% yesizwe sonkana, "Little Odessa" - kwabokufika kanye e-New York, lesi sibalo ngaphakathi 22%.
Naphezu kweqiniso lokuthi eBrooklyn ngo jikelele sibalo esiphakeme kakhulu isibalo sabantu abahola kusilinganiso, Russian District eNew York City sisonke sikhombisa Indinganiso low eziphilayo. Ngokwesibonelo, u-30% sabantu liyilezo futhi isibalo izimoto lengenako cishe kabili esingaphansi ngqo eNew York.
Lokhu akusona isimanga. isici okunjalo ukushintshashintsha banamuhla eRussia kanye namazwe amaningi post-Soviet. Ngaleso sikhathi, njengoba abanye akhazinyuliswe sokunethezeka, kuyilapho yokugcina bephoqeleka ukuba afune indlela yabo yokuziphilisa.
Njengoba sihambisana nale kuyinto ububanzi ungqimba labantu emali lengenako lesemkhatsini kanye nekhwalithi yempilo ezweni lilonke. Nokho, okwamanje Brayton Bich - ngempela "Little Odessa" futhi "eMoscow" kuka-United States i-agglomeration ngobukhulu ogwini Mediterranean.